Global Voices teny Malagasy » Roa Taona Aty Aoriana, Manoratra Taratasy Ho An’ny Rainy ny Zanaka Vavin’ilay Mpitarika ny Fanoherana Rosiana Nisy Namono · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Marsa 2017 20:47 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Akon'ny RuNet
Boris Nemtsov miaraka amin'ny zanany vavy, Zhanna. Sary: Facebook
Taona roa lasa izao, maty nisy nitifitra tao Maosko i Boris Nemtsov, praiminisitra lefitra Rosiana fahiny izay lasa filoha mpitarika ny mpanohitra. 55 taona izy tamin'izay, ary bala efatra teny amin'ny loha, fo, àty ary vavoniny no nahafaty azy raha iny izy niampita ny Tetezana Bolshoi Moskvoretsky iny, tsy lavitra an'i Kremlin.
Ny Alahady, andro iray nialoha ny fankalazana ny tsingerintaona faharoan'ny nahafatesan'i Nemtsov, an'aliny maro ireo nanao diabe tao Maosko hankalaza ny fiainany sy hisaona ny namoizana azy. Teo amin'ilay toerana nahafatesany, teo amin'ny làlan'ny mpandeha an-tongotra eo amin'ny Tetezana Bolshoi Moskvoretsky, nikarakara fahatsiarovana nataony tànana ireo mpikatroka mafàna fo, ho solon'ny takelaka fahatsiarovana ofisialy, izay nolavin'ny tao an-tanàna ny hametrahana azy. Manadio tsy tapaka ireo voninkazo, labozia, ary sary apetraka eo ny mpiasan'ny fiadidiana ny tanàna, saingy averin'ireo mpanohana an'i Nemtsov mandrakariva ilay takelaka fahatsiarovana isaky ny lasa ireo tarika mpanadio.
Ny Alatsinainy, namoaka taratasy iray tao amin'ny Facebook, nosoratany ho an'ny rainy,  i Zhanna Nemtsova, iray amin'ireo zanany efatra. Monina any Alemaina i Zhanna amin'izao fotoana izao, manao ny asan'ny mpanangona vaovao ho an'ny Deutsche Welle. Ny Jona 2015, nilaozany i Rosia, tamin'ny filazàny hoe nahazoany fandrahonana ho faty. Ito ambany ito ny dika manontolo avy amin'ilay taratasiny ho an'ny rainy efa nodimandry.
Taratasy ho an'ny dadako
Tsy misy andro iray tsy isaintsainako anao. Taorian'ny taona roa, azoko tanteraka fa ianao, ry dada, dia mijanona mandrakariva ho ilay olona ivo sy tiako indrindra eo amin'ny fiainako. Marina izany fony mbola velona teo ianao, ary mbola marina foana, taorian'ny fahafatesana nampivarahontsana nanjo anao.
Tena zavatra tsy nampoiziko velively io famoizana io, ary mbola tsy vitako mihitsy ny manaiky ny fahafatesanao hatramin'ny anio. Zavatra tsy tokony ho nitranga velively, saingy dia nitranga. Tampoka be ary mandrakizay.
Tsy olon'ny fivavahana aho, saingy na izany aza mbola hisy ny andro iray hafahantsika hitafa momba ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity.
Saingy ankehitriny tsy eto anivonay intsony ianao. Nanana hery nahagaga ianao. Nahasarika karazan'olona tena samihafa tanteraka, ary tsy nisy na iray aza tamin'io no hoe tsy nilaina. Fa dia toy izay fotsiny no fiasany.
Tia niresaka taman'olona ianao, tia olona, ary nanam-pitiavana ny fainana. Mazàna, tsy mitovy hevitra aminao ny olona, na tsy mankasitraka ny asa nataonao, saingy tsy nampaninona anao velively izany. Ny fifampikasohan'ny olombelona no nomenao lanja. Nezahanao ny nampitambatra zavatra tsy nampino: finoana ireo fotokevitra sy fahatakarana ny olona izay hafa fihevitra sy fihetsika noho ny antony maro samihafa.
Dada, fantatro fa tsy nirianao izany, ary tsy noeritreretinao ny hoe ho lasa maherifo, nefa dia maherifon'ny vanimpotoanay ianao.
Lasa anaran'ny firenentsika ny anaranao; voasoratra niaraka tamin'ny ainao sy ny rànao ho ao anatin'ny tantarantsika izany. Hainao tsara ny hakelin'izay mba azonay atao, saingy manao izay rehetra azonay atao izahay mba hanatanterahana izay ninoanao — izay namonoan-dry zareo anao.
Tiako ho fantatrao (na nampisalasala anao aza) fa ho ahy, dia voninahitra goavana no sady fiangaran'ny vintana ho ahy ny naha-zanakao vavy. Ary antenaiko fa farahafakeliny mba misy ampahany kely vitako ihany ny nandrasanao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/07/96228/